पत्रकार महासंघमा आचार्य दाजुभाइको 'दादागिरी' ले तनावमा प्रेस युनियन, महासंघको टेबुल कुर्सी पनि गायब !Nepalpana - Nepal's Digital Online
शुक्रवार, आश्विन १ गते २०७८
२०७८, आश्विन १ गते
# अफगानी महिला
पत्रकार महासंघमा आचार्य दाजुभाइको 'दादागिरी' ले तनावमा प्रेस युनियन, महासंघको टेबुल कुर्सी पनि गायब !
नेपालपाना श्रावण ७ २०७८
काठमाडौं। नेपाल पत्रकार महासंघ अहिले पनि निर्वतमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको निर्देशनमा चल्न थालेको छ । यो कुरा बाहिरिएसँगै अहिले नेपाल प्रेस युनियनभित्र ब्यापक विरोध सुरु भएको छ ।
युनियनतर्फबाट निर्वाचित अध्यक्ष विपुल पोखरेल धेरै जसो काठमाडौंमा नबस्ने र भएका बेला पनि आचार्यसँगै रहेर काम गरेको पाएपछि युनियन आवद्ध पत्रकारहरु रुष्ट भएका हुन् ।
सरकारले कोरोनाविरुद्ध पत्रकारका लागि उपलब्ध गराउने भनेको खोप माओवादीका ७ सयभन्दा बढी कार्यकर्तालाई पत्रकार महासंघका तर्फबाट सिफारिस गरेको पाइएपछि पत्रकारहरुले प्रश्न उठाउन थालेका हुन् ।
ललितपुर र अन्य खोप केन्द्रबाट माओवादी कार्यकर्तालाई समेत खोपका लागि महासंघका महासचिव रोशन पुरीले चिठी लेखेरै सिफारिस गरेको पाइएको छ।
यो विषय छानवीन हुनुपर्ने र गैरपत्रकारलाई पत्रकारको कोटा उपलब्ध गराएकाले छिट्टै बैठक राख्न अध्यक्ष विपुलसामू अन्य पदाधिकारीले माग समेत राखेका थिए । तर, विपुल भने स्पष्ट जवाफ नै नदिई बुधबार अमेरिका उडिसकेका छन् ।
त्यतिमात्र होइन, महासंघका पदाधिकारीका लागि बनाइएका कक्ष, टेबल, कुर्सी समेतमा माओवादीकै नेता कार्यकर्ताले एकलौटी जस्तै गरेको आरोप छ ।
महासंघको कार्यालयमा ६ जना सचिवहरुलाई बस्ने टेबुल, कुर्सी नै छैनन्। तर, माओवादीबाट निर्वाचित लेखासमिति संयोजक लेखनाथ न्यौपानेलाई भने महंगा सोफा, कुर्सी, टेबुलसहित बेग्लै रुमको व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वतमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र महासचिव पूरीले यति धेरै दुरुपयोग गर्दा पनि अध्यक्ष पोखरेल, बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, उपाध्यक्ष बाला अधिकारीले वेवास्ता गरेको भन्दै सचिवहरु पवन आचार्य र नारायणसुन्दर किलम्बुलगायतले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा युनियनमा आवद्ध पदाधिकारी र अन्य सदस्यहरुले आफु निकट पदाधिकारीलाई के महासंघ पुरै माओवादीको पोल्टामा गइसकेको हो ? भन्दै घेरा नै हालेका छन्।
आफ्नो अध्यक्षको कार्यकाल सकिदा पनि महासंघमा गोविन्द आचार्यले देखाएको अतिरिक्त रुचीलाई माओवादीको चालबाजी र युनियनको कमजोरीका रुपमा लिइएको छ ।
आफू अध्यक्ष हुँदा आचार्यले महासंघलाई भन्दा पदेन सदस्य रहेको प्रेस काउन्सिलमा बढी रुची देखाएका थिए । ३ वर्षको कार्यकालमा उनले काउन्सिलबाट झण्डै १० लाख रुपैया बराबरको काम गरेको महासंघका उतिबेलाका पदाधिकारीले बताए । अहिले पनि उनले विपुललाई काउन्सिल भित्र घुस्याई भत्ता बुझ्न लगाउने काम सुरु गरिसकेका छन् ।
त्यतिमात्र होइन, गोविन्द आचार्यले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सञ्चार क्षेत्रलाई आफ्नो हालीमूहाली बनाउनका लागि उनले डा. सुरेश आचार्यको सहारा लिएका छन् ।
उनीसहितका केही सिनियर पत्रकार देउवा वरिपरि घुमेपछि अन्य पत्रकारहरु चकित परेको सूचना प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयमै पुगेको छ ।
सरकारमा माओवादी, एमालेको माधव नेपाल समूहसहित सामेल भएपनि सञ्चार क्षेत्रमा भने माओवादीले आफ्नो प्रभाव जमाउने र काँग्रेसलाई थांग्नामा सुताउने रणनीति लिएको छ ।
प्रचण्ड निकट रहेका डा.सुरेश आचार्य र गोविन्द आचार्यको सक्रियतालाई युनियन र महासंघमा आवद्ध पत्रकारहरुले बडो संसयका रुपमा हेरेका छन् ।
वर्तमान सरकारको कांग्रेस पक्ष सञ्चार क्षेत्रमा रहेका भइरहेका नियुक्तिलाई कायमै राख्ने, चलाएर अदालतमा विवाद नपुर्याउने पक्षमा उभिएको छ ।
तर, माओवादी पक्ष भने सबै नियुक्तिलाई खारेज गरेर आफ्ना अनुकुलका कार्यकर्ता ल्याउन दवाव दिइरहेको छ ।
यो समुहले गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रासस मात्र होइन, प्रेस काउन्सिल जस्तो स्वायत्त निकायमा समेत हस्तक्षेप गर्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई उक्साइरहेको छ ।
देउवाले भने अहिले विवादमा आउने काम नगरौं भन्दै सुरेश आचार्य र गोविन्द आचार्यसहितलाई जवाफ फर्काएको स्रोतकाे दाबी छ ।
पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष पोखरेल चढेको गाडी दुर्घटनामा
प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्तिको प्रेस मञ्चले गर्यो स्वागत, विपक्षी गठबन्धनमा हस्ताक्षर गर्ने अध्यक्षलाई काउन्टर
‘डबल ब्ल्याक’ लेबलको चुस्कीमा मातेर अध्यक्ष बस्नेतविरुद्ध माओवादी पत्रकारको चुरिफुरी, युनियनको विरोध
श्रावण ७, २०७८ बिहिवार २०:५०:३१ बजे : प्रकाशित
# प्रेस काउन्सिल
नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन पूर्वप्रधानसेनापति कटवालकाे अमेरिकामा भव्य कार्यक्रम
धमाधम सरुवा, १२ जिल्लाका सीडीओ को कहाँ ? हेर्नुहोस् !
एमाले सांसद पाण्डे र भट्ट एकीकृत समाजवादीमा जान पाउने, सर्वाेच्चले जारी गर्याे यस्ताे आदेश
बालबालिका नै भविष्यका आशाका किरण हुन : राष्ट्रपति
परियोजना धितो राखेर कर्जा उपलब्ध गराउन उद्योग वाणिज्य महासङ्घकाे माग
माधव नेपालको पार्टीले शुक्रबार आलोकनगरमा कार्यालय उद्घाटन गर्दै
प्रधानसेनापति शर्माद्वारा रथी कार्कीलाई दज्र्यानी चिह्न प्रदान
लेबनानलाई आपतकालिन सहयोग पठाउँदै डब्लुएचओ
गठबन्धनलाई टक्कर दिन निरन्तर सक्रिय ओली, काठमाडौंमा गरे भव्य भाषण
संक्रमण बढेसँगै उपत्यकामा थपियो निषेधाज्ञा, यी क्षेत्र भए बन्द !
माल्दिभ्सबाट अदितिले सेयर गरिन् 'हट फोटोसुट' (तस्बीरहरु)